४५ वर्षमा ११औँ सन्तान |
प्रकाशित मिति :2016-11-16 10:38:52
समाजमा परिवार नियोजनका साधनहरूबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएर सुदूरपश्चिमको पहाडमा ४५ वर्षमा ११‌औँ सन्तान जन्माउने आमाहरू पनि छन् ।
बाजुरा । साप्पाटा– ६ की ४२ वर्षीया आवर्मा बुढाले १३ औँ सन्तान छोरा जन्माइन् । १५ वर्षमा बिहे गरेकी आवर्माले नौ बच्चा जीवितै जन्माइन् भने चारवटा मृत अवस्थामा जन्मिए । नौमध्ये सात छोरी र दुई छोरा छन् । पछिल्लोपटक उनलाई साप्पाटा स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी गराउन नसकेपछि नजिकैको बाधु स्वास्थ्यचौकीमा पुर्‍याइयो । त्यहाँ पनि प्रसूति गराउन सकिएन । बुढाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो । त्यहाँबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टी लगियो । स्वास्थ्यचौकीका डा. विकल लामिछानेको टिमले उनको प्रसूति गरायो ।
धेरै बच्चा जन्माउने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने र बुढेसकालमा बच्चा जन्माउने गर्नाले पनि महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको डा. विकल लामिछानेले बताए । एकातिर धेरै बच्चा अर्कोतिर बच्चा र आमाको स्वास्थ्यसमेत कमजोर हुन्छ । सरकारले वर्षेनी परिवार नियोजनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, दुर्गम तथा पछाडि परेका समुदायमा भने परिवार नियोजनको साधन प्रयोग सम्बन्धमा चेतनाको कमी रहेको स्थानीय मन विकले वताए । चेतना अभावले धेरै बच्चा जन्माउने र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगर्ने कारण बुढेसकालसम्म पनि बच्चा जन्माउने गर्छन् । कम उमेरमा बच्चा जन्माउने र उमेर ढल्कँदासम्म बच्चा पाउनाले कतिपय महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अहिले पनि दुर्गम गाउँमा परिवार नियोजनसम्बन्धी चेतना नभएको महिला अधिकार मञ्च बाजुराकी अध्यक्ष रुखमणि शाहले बताइन् ।